Jacaylkii Koobaad - Cutubka Labaad - Qaybtii 22aad. - Boga Wise Man
March 14, 2020 qawdhan
Cabdirisaaq markii uu soo fadhiistay miiska ayuu indhaha kusii daayay Sagal oo rabta inay fadhiisato kursiga oo diraceedii soo ururinaysa. Cabdirisaaq waxa wakhtigaas olol aanu hore isugu ogeyn ku sii shidmay wadnihiisa. Sagal iyaduna way la socotaa in indhahiisu sida laser-ka ama leebka ugu soo maqanyihiin laakiin waxay iska dhigtay inaanay lasocon.
Markuu ka bogtay ayuu C/risaaq u jeestay dhankiisa midig waxaanu arkay wiilkii iyo gabadhii (Ilkacas iyo saaxiibkeed Maxamed) oo si fiican u fadhiya una sheekaysanaya. Waxa aad usoo jiitay sida uu ninku u fadhiyo gabadha u dhegaysanayo iyaduna ay u rabto inay ka qosliso oo u raali geliso.
Cabdirisaaq wuxuu si fiican u eegay inankii. Wuxuu arkay inaanu isaga aad uga weynayn laakiin wakhti badan u dhexeeyo oo isagu aanu sidaa kalsoonida leh aanu marnaba gabadh u guri Karin sheekada. C/risaaq waxa u dareemay in hawl badani sugayso niyadiisana waxa markeliya buuxiyey walaac ah inaanu Sagal hanan karin iska daa inuu haystee.
Dhanka kale, Timo ayaa arkay dareenka Cabdirisaaq ee is bedelay iyo sida uu ugu dheygagay lamaanaha midigta ka fadhiya ee saxansaxada jacaylka cusub laga dareemayo.
Timo waxa uu ahaa raga kuwooda ka adag lulanka qalbigooda habeenkaa isaga ah laakiin waxa isu galay dhawr arrimood oo tamar cusub geliyey qalbigiisa kana dhigay mid aanu xukumi karin.
Waa ta koobaade waxa uu la fadhiyay dhalinyaro noloshu u cusubtahay. Geyaan is raba oo inay reero cusub yagleelaan u heelan.
Waa ta labaade, Hargeysa oo rooban oo habeena iyo ubaxa maqaaxida Time and Space ee laydhku soo saaray oo jawiga ka dhigay mid kamida kuwii abwaanadu gabdhaha ku ammaani jireen.
Waa ta saddexaade inantii Ayaan oo usoo lebisatay. Ku qanacsan. Rabta. Oo uu is arkay isagoo aan rabin inuu niyada ka dillo.
Sagal intay ka yaabtay sababta uu uga jeesan waayay lamaanihii Cabdirisaaq midigtiisa fadhiyey ayay la kaftantay oo weydiisay “Do you like her?”
C/risaaq intuu degdeg usoo jeestay ayuu ku yidhi “yaa?”
Sagal: Inanta miyaad ka heshay?
C/risaaq intuu yara khajilay ayuu si is-difaacidi ku jirto u yidhi “maya maya, anoo xagooda eegaya ayaan yara baxay”
Sagal hore umay fahmin hadalkiisa yara baxay, markaasay ku tidhi “xageed u baxday”
C/risaaq: Waxbaan ka yara fikiray. Soo ma jirto marmar adoo meel eegaya laakiin aad wax kale ka fikirayso balse aad meeshaa ku dhaygagto ood ka jeesan weydo.
Sagal way qososhay, intay afka gacanta saartay ayay wejigeedana midig usii yara jeedisay.
Cabdirisaaq markuu intaa arkay ayuu xasuustay sheeko uu maalin hore Timo uga sheekeeyey. Nin abwaana oo Carab ahaa iyo gabadh uu jeclaa oo ninku heer xun jacaylka ka gaadhayay ilaa uu gabay cajiiba oo uu lahaa haday suurto gelayso indhahayga wiilkooda ayaad ku noolaan ahayd. Markaan soo jeedo waan ku daawan lahaa. Markaan hurdo waan kugu riyoon lahaa. Markaan dhintana cidi iigamay kaa dambeyseen oo inta indhahayga laysku jebiyo ayaa la ila kaa aasi lahaa.
Cabdirisaaq waxa uu ku jeestay saaxiibkii Timo.
Cabdirisaaq: Gabyaagii aad maalintii dhawayd iiga sheekaynaysay ee gabadha kulahaa markaan dhintana waa la ila kaa aasi intaan noolahayna indhahaan kugu sidan horta magaciisii muxuu ahaa.
Timo: Ma magaciisaad u sheegaysaa inanta mise sheekadaad uga sheekayn lahayd? Ninkaas laakiin nin qalbigiisa gacanta kusita oo waxa uu rabo sheegta ayuu ahaa ha noqon sidiisa iska daa.
Timo: Miyaanan kaaga sheekayn in su’aalaha tooska ah, hadalka tooska ee aan sheeko iyo sarbeebi ku ladhnayn ay dumarku diidaan. Ma xasuusatid in ardayda xisaabta barta iyo kuwa falsafada barta ay kukala fiican yihiin shukaansiga. Iyadoo xisaabta iyo falsafadu yihiin carab iyo labadiisa daan. Sababtuna ay tahay in kuwa falsafada bartaa ay rabitaankooda sheeko iyo sababo ku bineeyaan. Halka kuwa xisaabta bartaa ay waxkasta rabaan inay isu geysmaan oo isku sar go’aan.
C/risaaq intuu indhaha ururiyey ayuu ku yidhi “hadaa maxaad xisaabta ii baraysay oo iigu wareerisay maad falsafada I bartid weliba ta hablaha iyo sheekadooda?”
Timo aad buu u qoslay, weliba qosol ay xataa qoladii miiska u dhaw fadhiday ay soo eegeen.
Timo: Barashada xisaabtu fikirkaaga kale iyo fahamkaaga guud ayay dhisaysaa. Haasawe inaad barato waa wax fudud laakiin waa laga horeeyaa oo inaad aqoon kale yeelato oo aad naftaadana barato, raga barato, dumarka barato, kadib ayaad haasaawe barashadiisu muhiim tahay imikase waa inaad adigu taada wadataa oo kolba gidaar isku qaadaa.
C/risaaq: Dee haaye, waxaan rabaa inaan (intuu sagal jaleecay dhankeeda) aan gacanta ku dhigo.
Timo: Maskaxdaada ka curi waa caadi.
Ayaan ayaa intii ay labada nin isku jeedeen ka fa’iideysatay wakhtigii oo saaxibadeed weydiisay “waa habeen fiican soo maaha?”
Sagal intay u dhoolacadaysay saaxibadeed ayay madaxa u lushay una il-jabisay intay eegtay xagii Timo. Iyadoo ka wada calaashaan muxuu leeyahay. Ayaan iyaduna waxay ku jawaabtay dhoolacadayn kale oo muujinaysay inay hawshu siday ugu talo gashay u socoto.
axmed timo Ayaan cabdirisaaq jacayl koobaad sagal Sheeko Somalia Somaliland
Previous Post Gumeysiga Qalinka iyo Ribada
Next Post Aragtida Aan Ka Fa’iidey Hadraawi – Qaybta 1aad